ကျားနည်းပညာသည် IBC 2019 တွင်ပူးပေါင်းသိုလှောင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပြသသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ကျားနည်းပညာ IBC 2019 မှာပူးပေါင်းသိုလှောင်မှုနဲ့ Workflows တင်ဆက်ပေးတယ်
တတိယပါတီ developer များနှင့်အတူ AWS နှင့်ပေါင်းစည်းမှု၏လက်တွေ့ဆန္ဒပြပွဲများဒီနှစ်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာကုန်စည်ပြပွဲမှာကျားနည်းပညာရဲ့ရပ်တည်ချက်၏အဓိကဖွဲ့စည်းစေမည်
GA, အမေရိကန်, 11 စက်တင်ဘာလ 2019 - ကျားနည်းပညာယင်းအသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်များအတွက် cloud storage နှင့်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, အမေဇုံက Web Services က (AWS) ပြုကြရန်တွန်းအားပေးသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်သရုပ်ပြယခုနှစ် IBC ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားစနစ်များကိုဖောက်သည် Archive ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတိုးပွားလာ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, Cloud ဒါမှမဟုတ် hybrid မိုဃ်းတိမ်ကိုစနစ်များပေါ်သို့အဟောင်းများကိုတိပ်စနစ်များထဲကနေအမွေ archive ကိုအကြောင်းအရာပြောင်းရွှေ့ကူညီရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ကျားစနစ်များ SPECTRA Logic နှင့် Qualstar သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထားစနစ်များနှင့်အတူရွှေ့ပြောင်းစီမံခန့်ခွဲဖို့မီဒီယာကိုဘာသာပြန်စာပေတိပ်-to-မိုဃ်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်အဖြစ်။ ထို့အပြင်ခေတ် cloud storage နဲ့ content ဖန်ဆင်းခြင်းစနစ်များသို့ပေါင်းစည်းကျားနည်းပညာရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု tools များ၏ display တွေရှိပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကျားဖက်ကွန်ယက်ကိုယခု Nexsan တစ် StorCentric ကုမ္ပဏီပါဝင်သည်။ Nexsan နှင့်ကျား Nexsan Nexsan သိုလှောင်မှုစနစ်များအဘို့ကျားနည်းပညာပူးပေါင်းအကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုပူဇော်မည်သည့်အောက်တွင်တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများသဘောတူညီချက်, လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ။ Nexsan Hardware နဲ့ကျား software ၏ပေါင်းစပ်ယခုရရှိနိုင်သည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Nexsan အရောင်း network ကတဆင့်ပြီးပြည့်စုံသော, high-performance ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာပလက်ဖောင်း, ပေးပါသည်။
IBC မှာ 7.B58 ရပ်တည်ရန်ဧည့်သည်ကျားနည်းပညာ AWS ၏တန်ခိုးပြုကြရန်တွန်းအားပေးနေသည်မည်သို့တိုက်ရိုက်ဆန္ဒပြပွဲများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါကျားနည်းပညာအခြားဝန်ဆောင်မှုများအကြားအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးနဲ့ cloud applications များဆန္ဒပြခြင်းကိုခံရလတံ့သောခန်းမ5အတွက် AWS တဲနဲ့ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်ရပ်တယ်။ file တွေကိုမီဒီယာဘာသာပြန်စာပေ Inc မှနည်းပညာကို အသုံးပြု. တိပ်ကနေပွနျလညျထူထောငျနှင့်ကျားတံတားမှတဆင့်ပေါင်းစပ်အရာအားလုံးကိုအတူအုံ့ HQ မိုဃ်းတိမ်ကိုမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မည်။
ကျားတံတား key ကို cloud storage Workflows နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုပင်ပိုမိုမြန်ဆန်အသစ်တစ်ခုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း restore feature ကိုကျေးဇူးတင်အရင်ကထက် data တွေကိုပြန်လည်ရယူခြင်းစေသည်။ ဤအချိန်ရဖို့နဲ့လိုအပ်အချက်အလက်များ၏သာနိမ့်ဆုံးပမာဏကို restore ပြန်အားဖြင့်သိုလှောင်ရန်နေရာပေါ်ကယ်ဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်နိုင်ပါတယ်။ ကျားနည်းပညာ, software နှင့် high-performance ကိုဒီဇိုင်းပေါ်လုပ်ငန်းအိုင်တီ, စောင့်ကြည့်, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်များအတွက်လုံခြုံ data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည်၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုတညျဆောကျခဲ့သညျ။ ပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်တွေက၎င်း၏ထုတ်ကုန်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကျိုးရှိစွာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအတိုင်းဤကဏ္ဍများ၌ဦးဆောင်အသုံးပြုသူများနှင့်ပေးသွင်းသူများကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ကျားနည်းပညာကိုလည်း high-performance ကို Multi-user ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် Workflows စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကျား Store ကိုပြသပေးမှာ; Multi-user ကစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဒီဇိုင်းကျား Spaces နှင့် လွန်စွာလိုလားသော ဘင်သော့ခတ်; နှင့်ကို virtual သိုလှောင်မှုမန်နေဂျာကျားရေကူးကန်။
ကျားနည်းပညာကို အသုံးပြု. ထိပ်အဆောက်အဦတွေထဲမှာမနာလို Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသည်။ "ကျနော်တို့ကရှစ်နှစ်ကျော်ဘို့ကျားထုတ်ကုန်သုံးပြီးပြီ," ငြူစူခြင်းဗြိတိန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Jai ဂူကပြောပါတယ်။ "ငြူစူခြင်းမကြာခဏမြန်ဆန် turnaround ဘဏ်ဍာတောင်းဆိုနေတာအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ကျားရဲ့စနစ်တွေကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ထောက်ခံမှုပေးသညျ။ "
ကျားတံတားလည်းအိုင်တီက၎င်း၏ဇာတိ form မှာကျားတံတားအဖြစ်ကျားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်ဆင်းခြင်း tools များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ရသောအထူးကုခေတ်, လုပ်ငန်းအသွားအလာဗြိတိန်နိုင်ငံထံမှ Coeus cloud storage နှင့်အတူပေါင်းစည်းပြသပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးတည်း-ရပ်သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်, ကျားတံတားညာဘက်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ညာဘက်အရပျ၌လက်ျာဒေတာရှိသည်ဖို့အသုံးပြုသူများအခှငျ့အာဏာ။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများ7စက်တင်ဘာလမှ 58 ကနေအမ်စတာဒမ် RAI အတွက် IBC မှာကျားနည်းပညာရဲ့ရပ်တည်ချက်, 13.B17 ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အမေဇုံက Web Services ကအကြောင်း
13 နှစ်ပေါင်းအဘို့, အမေဇုံက Web Services ကကမ္ဘာ့စုံဆုံးနှင့်ကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးသောမိုဃ်းတိမ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ AWS 165 ကျော်ကွန်ပျူတာများ, သိမ်းဆည်းခြင်း, databases ကို, ကွန်ယက်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, စက်ရုပ်, စက်သင်ယူမှုနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုများအတွက်အပြည့်အဝ featured န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်, အရာများ၏အင်တာနက်ကို (IoT), မိုဘိုင်း, လုံခြုံရေး, မျိုးစပ်, ကို virtual နှင့်လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန် (VR နဲ့ AR 69 ရရှိနိုင်ဇုန် (AZs) မှ), မီဒီယာ, နှင့်လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးရေး, ဖြန့်ကျက်ခြင်း, စီမံခန့်ခွဲမှု 22 ပထဝီဒေသများအတွင်း, အမေရိကန်, သြစတြေးလျ, ဘရာဇီး, ကနေဒါ, တရုတ်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသကြီး, အိန္ဒိယ spanning, အိုင်ယာလန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, စင်္ကာပူ, ဆွီဒင်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ။ ဖောက်သည်များအပါအဝင်အမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာစတင်, အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းများနှင့်ဦးဆောင်အစိုးရအေဂျင်စီများ-ယုံကြည်မှု AWS သန်းပေါင်းများစွာ, သူတို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပါဝါပိုပြီးတမျးဖြစ်လာများနှင့်အောက်ပိုင်းကုန်ကျစရိတ်ရန်။
Nexsan®လုံလုံခြုံခြုံအရေးပါသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေတာ, သိုလှောင်ကာကွယ်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဖောက်သည်ဖွင့်, တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသိုလှောင်မှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 1999 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Nexsan ရည်ရွယ်ချက်-built သိုလှောင်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခေတ်ရဲ့သွက်လက်ကျန်ရှိနေသောစဉ်အလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောသိုလှောင်မှုပို့ဘို့ခိုင်ခံ့ဂုဏ်သတင်းကိုတညျဆောကျခဲ့သညျ။ ၎င်း၏ထူးခြားသောနှင့်မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာလိပ်စာများ, စုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသိုလှောင်မှုနှင့်လုံခြုံသိမ်းဆည်းတစ်ဦးပြည့်စုံအစုစုနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြစ်ပေါ်နေသော။ Nexsan ပွိုလုံခြုံရေးနှင့်လိုက်နာမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားသာချက်သို့ data ကိုလှည့်အားဖြင့်သိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲနေသည်။ အစိုးရ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပညာရေး, ဘဝကသိပ္ပံ, မီဒီယာ & Entertainment ကများနှင့် Call Center တို့အပါအဝင်အသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်းအမျိုးမျိုးများအတွက်စံပြ။ Nexsan အမှတ်တံဆိပ်များ၏ StorCentric မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အလုံလုံခြုံခြုံစီးပွားရေးအချက်အလက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သီးခြားကွဲပြားခြင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Cloud သိုလှောင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သိုလှောင် ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှု ြငူစူခြင်း ခေတ် Post ကိုထုတ်လုပ်မှု IBC 2019 ပေါင်းစည်းမှု မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု မီဒီယာကိုဘာသာပြန်စာပေ Inc မှ Nexsan အုံ့ HQ post ကိုထုတ်လုပ်မှု ကျား BridgeAWS ကျား Store က ကျားနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality Workflows 2019-09-11
နောက်တစ်ခု: pixel ပါဝါ Software များထူထောင် StreamMaster ပေါင်းစည်းပလေးအောက်ကိုမှ uncompressed အိုင်ပီ Capability သတ်မှတ်ထားသောဖြည့်စွက်